YEYINTNGE(ကနဒေါ): Wednesday, April 20
သမ္မတသစ်ရဲ့ ချွင်းချက်မရှိ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကို ကျွန်တော်တို့ အားလုံး မျှော်နေပါတယ်
May Thingyan Hein on Tuesday, April 19, 2011 at 8:24pm
အကိုလို ၊ ဖခင်လို ဖြစ်နေတဲ့ ကျမရဲ့ အကိုတယောက်က မေးနဲ့ပို့ပေးလိုက်တဲ့ စာပါ။ ဖတ်ရင်းနဲ့ ခံစားရလို့ အားလုံးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ဦးဝင်းတင် ပြောဖူးတဲ့စကား မှတ်မိတယ်။
“ ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့် ရှိနေပါစေ၊ ထောင်ဆိုတာလူတစ်ယောက် နေဖို့ သင့်တော်တဲ့အရပ် မဟုတ်ဘူး။ ”
စစ်ကြောရေးစခန်းမှာ နေရတာ၊ထောင်ထဲမှာ အချိန်ကုန်ရတာ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ 
ဘ၀ကို တစ်ဆင့်လျှော့ချ ခံထားရတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ နေခဲ့ဖူးတဲ့ အကျဉ်းကျနိုင်ငံရေး
သမားတွေ ကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်။ အိမ်ထဲက အိမ်အပြင်ကို (၁) လ တိတိ မထွက်ဘဲ
နေကြည့်ကြပါ။ လွတ်လပ်စွာ သွားလာရှင်သန်ခွင့်ရဲ့ အရသာကို ဝေမျှနားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဆိုရင် ထောင်ထဲက နိုင်ငံရေးရဲဘော်တွေရဲ့ ရစ်သန်တွေ ဘယ်လိုနေကြမလဲဆိုတာ
ကိုယ်ချင်းစာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေး
အကျဉ်းသား နှစ်ထောင်ကျော်ရှိပါတယ်။ ဘာပြစ်မှုတွေ သူတို့ ကျူးလွန်ထားကြလို့ နှစ်ရှည်
ထောင်ဒဏ်တွေ ခံနေကြရတာလဲလို့ မေးမယ့်အစား သူတို့ ရဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအပေါ် ထားအပ်
တဲ့ စေတနာကို ကြည့်ရပါမယ်။
တည်ဆဲဥပဒေကိစ္စ၊ ဒီမိုကရေစီရေး ဒါတွေနဲ့ “ ကိုင် ” ပြီး စကားပြောနေကြရင်ဖြင့် တစ်ယောက်
ခေါင်း တစ်ယောက် ရိုက်ခွဲကြဖို့ ဘဲရှိတော့တယ်။ သူ့ ဘက် ကိုယ့်ဘက် ရှိမှာပေါ့။
“ ဆင်စွယ်ရွာလူသတ်မှု ” နဲ့ အလံနီသခင်စိုးကြီး ထောင်ထဲမှာ ဘယ်နှစ်နှစ်နေခဲ့ရလို့ လဲ။ သေဒဏ်
ပေးခဲ့ပေမယ့် ဦးနေ၀င်းက ငဲ့ညှာစွာနဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နေ့ ကြီးရက်ကြီးအထိမ်းအမှတ်တို့ 
ဘာတို့ အကြောင်းပြပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးလို့ လွှတ်ပေးတဲ့အစိုးရကို
၀ိုင်းဆဲမယ့် အတိုက်အခံမရှိပါဘူး။ နတ်လူသာဓုခေါ်ကြမယ့်အလုပ်ပါ။ တစ်တိုင်းပြည်လုံးက
အခုအစိုးရသစ်ဆိုတာ ပါတီစုံစနစ်နဲ့ တက်လာတဲ့အစိုးရဆိုရင် ဒီလိုတွေးကြည့်လို့ ရပါသေးတယ်။
ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထဲမှာ တစ်ပါတီစနစ်ကို တိုက်ပွဲဝင်ဖြိုချခဲ့တဲ့၊
ပါတီစုံစနစ်ကို တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ကျောင်းသားတွေ တထောကြီးပါနေပါတယ်။ သူတို့ 
ကြောင့် ဒီစနစ်ဒီခေတ်ကို တစ်ဆင့်ရောက်လာရတယ်လို့ ကောက်ချက်ချလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ
အတု၊ အစစ်ကိစ္စ ခဏ ဖယ်ထားပါ။
လက်ရှိအာဏာရနေတဲ့ဝန်ကြီးဝန်လေးတွေ သိဖို့ က တာဝန်က အနားယူသွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး
ကြောင့် ဆိုတာထက် အခု မြန်မာပြည်အသီးသီးက အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ ဒုက္ခမျိုးစုံခံစားနေရတဲ့
နိုင်ငံရေးသမားတွေကြောင့် ဒီပို့ စ် ဒီဘ၀ကို ရောက်နေ၊ ရနေကြတယ် ဆိုတာပါဘဲ။ ထောင်ထဲက
ဒီမိုကရေစီရေး လမ်းဖောက်ခဲ့သူတွေကို မမေ့သင့်ဘူး။
တော်လောက်ပါပြီ။ လွတ်လပ်ခွင့်လည်း ပေးသင့်ပါပြီ။
မြန်မာပြည်အနှံ့ လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းစောင်းမကျန် မဲပုံးထောင်စရာ မလိုပါဘူး။ နိုင်ငံရေး
အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးသင့် မသင့် ပြည်သူ့ ဆန္ဒ ခံယူနေစရာ မလိုပါဘူး။ ကြိုတင်မဲတွေ ဖွင့်
ကြည့်ရင်လည်း လွှတ်ပေးဖို့ ဘဲ ဖြစ်မှာပါဘဲ။ လက်ရှိအာဏာရပါတီ ထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ် ဦးဌေးဦး
ပြောတာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ “ အမည်ခံပါတီ မဖြစ်စေရဘူး၊ ပြည်သူ့ ဆန္ဒကို ထင်ဟပ်တဲ့ပါတီ ဖြစ်
ရမယ် ” ဆိုလား။
ဟုတ်ပါ့မလား မောင်ကာဋုရေ ဆိုပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွှတ်ပေးရေးကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ မနေ
စေချင်ဘူး။ အချိန် ဆွဲ မနေစေချင်ဘူး။ ဘယ်သူ့ အမိန့် မှလည်း မျှော် မနေစေချင်ဘူး။ ပါတီ အရေးပေါ်
အစည်းအဝေးတစ်ခုခေါ်ပြီး သမ္မတကို ဆုံးဖြတ်ချက် မြန်မြန် ချ စေချင်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်
လို့ ဖင့်နှေးမနေဘဲ မြန်မြန်ထက်ထက် ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
ထောင်ထဲက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားတွေက တရုတ်လူမျိုးတွေလား။ ယန်းကီးစပ် အမေရိကန်တွေ
လား။ ဖမာဖမာလို့ ခေါ်တဲ့ ယိုးဒယားတွေလား။ ဆလန်မာပါကီးတွေလား။ နိုး နိုး မဟုတ်ကြဘူး။
သူတို့ တွေဟာ ပြည်ထောင်စုဖွား မြန်မာလူမျိုးတွေပါ။ တရေထဲသောက် တမြေထဲနေတွေ မဟုတ်ဘူး
လား။ မြန်မာပြည်ကို ကမ္ဘာ့ မြေပုံက ကွယ်ပျောက်သွားအောင် လုပ်မယ့်သူ တစ်ယောက်မှ မပါဘူး။
မြန်မာပြည်ကို ထူးထူးကဲကဲ သိပ်ချစ်ကြတဲ့ မျိုးချစ်သမားတွေလို့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို တိုင်တည်နိုင်ပါ
တယ်။ အခန့် မသင့်လို့ စနိုးစနောင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတာကို နှစ်ဘက်စလုံးက ပုဒ်မ ချ သင့်ပြီ။
ဖျားနာနေတာ ကြာလှပြီဖြစ်တဲ့ ဟောဒီမြန်မာပြည်ကို နာလန် ထ အောင် လုပ်နိုင်သူတွေ လုပ်ပေး
ကြပါ။ သန်းခြောက်ဆယ်လုံး ဆက် မရှုံးချင်ဘူး။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးလိုက်ရင်
ဆူပူမှုတွေ၊ မတည်ငြိမ်မှုတွေ ချက်ချင်း ထ ဖြစ်မယ်လို့ ဘယ်သူများ ၀ါဒဖြန့် ထားလို့ လဲ။ ကဲ ..
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထွက်လာတာ (၆) လ ပြည့်တော့မယ်။ ဒေါ်စု ဘာတွေပြောလဲ၊ အစိုးရသစ်ကို
ဟာ.. သူတို့ က ဒေါ်စုလို မဟုတ်ဘူး၊ ပြန်ထွက်လာရင် လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြကြမှာ၊ ရွှေဝါရောင်လို
ထပ် ဖြစ်မှာလို့ တွေးကြသူတွေ ရှိနေသလား။ ဒါ US AND THEM ပေါ်က ထိုင် ကြည့်တာဘဲ။ ပြည်သူနဲ့ 
တိုင်းပြည်ဖွံ့ ဖြိုးရေးကို ကျောခိုင်းတာဘဲ။
ထပ် လုပ်ပါပြီ။ ထပ် ဆူပါပြီ။ နောက်တကြိမ် ပြန် ဖမ်းပေါ့။
သမ္မတသစ်ရဲ့ ချွင်းချက်မရှိ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကို ကျွန်တော်တို့ အားလုံး မျှော်နေပါတယ်။
၁၉- ၄- ၂၀၁၁
BY YeYint Nge ... 4/20/2011 1 comment
Kyaw Thu on Wednesday, April 20, 2011 at 5:44pm
ကျွန်တော်တို့၏ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ကျေးဇူးရှင် လူမှုရေးအာဇာနည် တစ်ဦးဖြစ် သော စာရေးဆရာ၊ ဒါရိုက်တာ၊ နာယကကြီး ဘဘ ဦးသုခ၏ သမိုင်းကိုတော့ ဖုံးကွယ်၍မရ၊ ဖျောက်ဖျက်၍မရ၊ လစ်လျှူရှု၍မရ၊ ထိမ်ချန်၍မရ။ အများပြည်သူ (၇) ရက်သားသမီး ဆင်းရဲချမ်းသာ လူမျိုးဘာသာမရွေး လူသားအားလုံး၏ နာရေးကိစ္စများကို အခမဲ့ ကူညီဖေးမပေးခဲ့သော စာရေးဆရာ၊ ဒါရိုက်တာ၊ နာယကကြီး ဘဘ ဦးသုခသည် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဟူသော လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့ကြီးအား ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ မျိုးစေ့ချ၊ အုတ်မြစ်ချ ထူထောင် ခဲ့သော လူမှုရေးအာဇာနည်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်သည့်အပြင် ဘဘဦးသုခသည် အနုပညာမှာရော စာပေ လောကနယ်ပယ်မှာပါ စိတ်ကောကိုယ်ပါ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အတွက် ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးပေါင်းများလည်း ပေးအပ်ချီးမြင့်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆု (၆) ခုအပြင် ၁၉၅၈ ခုနှစ်မှာ အလင်္ကာကျော်စွာဘွဲ့၊ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်မှာ ရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးများ၏ သူရသာတီရုပ်တု၊ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ မဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇဘွဲ့၊ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာပဲ ပခုက္ကူဦးအုံးဖေ တစ်သက်တာစာပေဆု၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ အာဆီယံစာပေဆု၊ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ ကျေးဇူးသစ္စာ မြတ်ဘဏ္ဏာဂုဏ်ပြုဆု၊ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ လူမူထူးချွန်(ပထမအဆင့်)၊ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာပဲ ဂုဏ်ထူးဆောင်စာပေပါရဂူဘွဲ့ Ph.D ၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ဓမ္မဗိမာန် တစ်သက်တာ စာပေဆုတွေကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွေမှစပြီး ဘဘဟာ ရန်ကုန်တိုင်း ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး သင်တန်းကျောင်းနဲ့ တက္ကသိုလ်ဆရာလောင်း မွမ်းမံသင်တန်းတွေမှာလည်း စကားပြောဟောနည်းပညာ၊ တရားဟောပြော နည်းပညာတွေကို သင်ကြားပို့ချခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာလည်း ရာမာခရစ္စနာ၏ သုတပုံပြင်များ စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဇန်န၀ါရီလ (၄) ရက် လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာပဲ ဘဘဟာ မဟာသဒ္ဓမ္မ ဇောတိက ဘွဲ့တံဆိပ်ကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း တွေမှာလည်း ဘဘရဲ့ တရားတော်နဲ့ ပတ်သက်သည့် စာအုပ်စာပေတွေ သုတရသစာအုပ်တွေဟာ ထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဘဘဦးသုခရဲ့ ဘ၀သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ လူသားတွေအတွက် အကျိုးရှိမည့် စာအုပ်စာပေ အများအပြားကို ရေးသားခဲ့ပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၆) ရက်နေ့မှာတော့ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကနေပြီး ဂုဏ်ထူးဆောင် စာပေပါရဂူဘွဲ့ကို အပ်နှင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ဘဘဟာ စာပေဟောပြောပွဲတိုင်းမှာ အမေနဲ့ပက်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခု ကိုတော့ ဟောပြောတတ်စမြဲပါ။ အမေများနေ့အတွက် ကျင်းပတဲ့ စာပေဟောပြောပွဲ တစ်ခုမှာတော့ ဘဘဟာ အမေတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ စာပိုဒ်လေးတစ်ပုဒ်ကို ရွတ်ဆိုပေးခဲ့ပါတယ်။ “ကမ္ဘာကြီး ကမ္ဘာကြီးကို အာဒံနဲ့ ဧ၀ကပဲ စတယ်လို့ပြောပြော … ဗြဟ္မာကြီးလေးဦးက စတယ်ပဲ ပြောပြော … သူတို့ထဲမှာ အမေဆိုတဲ့ ဣတ္ထိလိင်ပါလာလို့သာ ကမ္ဘာကြီးက အဆက်မပြတ်ဘဲနဲ့ ယနေ့အထိ ကျွန်တော်တို့အထိ သားစဉ်မြေးဆက်တွေ ဖြစ်လာတယ် မဟုတ်လားအမေ … အမေမှန် သမျှ ဘာသာခြင်း လူမျိုးခြားရယ်လို့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ မရှိဘူးအမေ … သားသည်အမေ တစ်ယောက်ဟာ အမေပါပဲ အမေ … သူကယုတ်ညံ့လို့ … သူကလူမျိုးခြားမို့လို့ … သူက ဘယ်ဘာသာ မို့လို့ မဟုတ်ပါဘူးအမေ ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပြီးမှ ပြောတာပါ … အမေမှန်ရင်လေ ကျွန်တော့်မျက်စိ အောက်မှာပဲ မိန်းမရွှင်ဖြစ်နေပါစေ … အမေဟာ အမေပါပဲ” ဟု အမေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရဲရဲတောက် ပြောကြားခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောသူသည် အမေဖြစ်သည်ဟု အမေများ၏ ဂုဏ်ပုဒ်ကို ဖော်ကျူးကာ “အမေများနေ့” ဟူ၍ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတင်ကျင်းပရန် တိုက်တွန်းခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုကဲ့သို့ အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီး လူထုအတွက် အကျိုးပြုခဲ့ရုံသာမက ဘာသာသာသနာ အတွက်ပါ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင် လေးစားအတုဖွယ်ကောင်းတဲ့ စာရေးဆရာ၊ ဒါရိုက်တာ၊ နာယက ကြီး ဘဘဦးသုခသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ(၇)ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နံနက် (၁၁း၃၀) နာရီအချိန်၌ အမှတ်(၂) စစ်ဆေးရုံ၌ ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ကျေးဇူးရှင် ဘဘဦးသုခ ဒီလောကကြီးမှာ မရှိတော့ပေမယ့်လည်း ဘဘရဲ့ အနုပညာတွေ၊ စာပေတွေနဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်မူ တွေဟာ လူမျိုးနဲ့ဘာသာ သာသနာအတွက်ကို အခုချိန်ထိ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘဲ ပြည်သူလူထုအတွက် မှတ်သားဖွယ် ကျန်ရစ်နေစေရန်အတွက် ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် အစွမ်းကုန် ဘဘဦးသုခ၏ သမိုင်းအတ္ထုပ္ပတိကို ဖော်ထုတ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
ဘဘဦးသုခ၏ လမ်းညွှန်မှာကြားချက်များဖြစ်သော ဗြဟ္မစိုရ်တရား (၄) ပါးအား မြေ၀ယ်မကျ လက်ကိုင်ကျင့်တုန်း ပေးဆပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဘဘဦးသုခ၏ ရုပ်ပုံလွှာအား မျိုးဆက်သစ် ကလေးငယ်များ မှတ်သားသိရှိ မြင်ယောင်လာရန်အတွက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၃) ရက် စနေနေ့ တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သော နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ၁၀ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားဖွင့်ပွဲအား ကျေးဇူးရှင် ဘဘဦးသုခ၏ ရုပ်ထုဖွင့်ပွဲ အစီအစဉ်ဖြင့် စတင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘဘဦးသုခ ၏ မိတ်ဆွေရင်းချာဖြစ်သော ကွယ်လွန်သူ ပန်းပုဆရာကြီး ဦးဟန်တင် (နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)မှ ပထမဦးဆုံး ပို့ဆောင်သင်္ဂြိုလ်ပေးခဲ့ရသူ) တပည့်ရင်း-ဦးနန်းဝင်း (ပန်းချီ/ပန်းပုပညာရှင်)၏ အနုပညာစွမ်းအား၊ အနုပညာပါဝါတို့ဖြင့် ထုဆစ်ပုံဖော်မှုကို စတင်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ပန်းချီ/ပန်းပု ပညာရှင်ကြီး-ဦးနန်းဝင်းအားလည်း ဘဘဦးသုခ၏ ရုပ်ထုပုံဖော်မှုအား ဘဘဦးသုခအား အနီးကပ်ပြုစု စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သော ဘဘ၏ သားတပည့် ကိုလှအေးမှလည်း လာရောက်ပံ့ပိုး အကြံပြုခဲ့ပါသည်။ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှလည်း ဘဘဦးသုခ၏ ရှားပါးလှသော ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများအား စုဆောင်းပြီး ဘဘဦးသုခ၏ ရုပ်ပုံလွှာ ပန်းပုရုပ်ထုကြီးအား သက်ဝင်လှုပ်ရှား မှုရှိစေရန် သွားရောက် အကြံပြု ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။
သမိုင်းကို ဖျောက်ဖျက်၍မရ။ ဖုံးကွယ်၍မရ။ လိမ်လည်၍မရ။ လစ်လျှူရှု၍မရ၊ ထိမ်ချန်၍မရ။
အချိန်တန်လျှင် သမိုင်းစစ်တွေ ပေါ်ထွန်းလာမည်။
ကျေးဇူးရှင် ဘဘဦးသုခ၏ ရုပ်ထုသည် ကျွန်တော်တို့အား စကားတွေအများကြီး ပြောနေပြီ ဖြစ်သည်။
BY YeYint Nge ... 4/20/20110comment
တောင်ငူသွားတောလား...ပုဆိုးစုတ်နဲ့ မီးရထား...laptop လား ?....computerလား...?
Myat Thu Tuesday, April 19, 2011 at 4:06am
ကျနော် နဲ့ သူငယ်ချင်း သုံးယောက် သင်္ကြန်ရက် မှာတောင်ငူ က သူငယ်ချင်းအဒေါ်တွေ ထံ အလည်သွားပြီး ဒီနှစ် သင်္ကြန် ကိုတောင်ငူ မှာ လည်ကြမယ်ဆိုပြီး ရန်ကုန်ကနေ ရထားနဲ့တောင်ငူကို သွားခဲ့ကြပါတယ် ။ နေ့လည်ရထားစီးရမှာ ဆိုတော့ တော်တော်ပျင်းရိညီးငွေ့ စရာခရီးဖြစ်နေတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ ပဲ ရထားထွက်ရော ဆိုပါတော့ဗျာ..။
နေကလဲပူ လယ်ကွင်းတွေ ထဲ က ဖြတ်တိုက်လာတဲ့ လေပူတွေ ၊ ရထားတွဲတွေပေါ်က ထွက်တဲ့ ချဉ်စုတ်စုတ် အနံ့တွေကြောင့်တော်တော် စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ် ။ ရန်ကုန် အထွက် ရောက်တော့ ကျနော် နဲ့အတူပါလာတဲ့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် က သူတို့ ရဲ့ipod လေးတွေ ထုတ်ပြီး တယောက် က ဂိမ်းဆော့ တယောက် ကတော့သီချင်းနားထောင်ပြီး ပါတ်ဝန်းကျင်ကို အာရုံလွဲပြောင်းလိုက်ပါတယ်.။ ကျနော် မှာ က တော့laptop ပဲ ပါလာတာမို့ထုတ်လိုက်ပြီး ကျနော် ကြိုတင်ထည့်လာခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေ ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်.။
ဒီလိုနဲ့ နာရီဝက် လောက်အကြာမှာတော့ရထားလက်မှတ်စစ်တွေ ကျနော်တို့ တွဲကိုရောက်လာပြီး လက်မှတ်စစ်ရောဆိုပါတော့..။ ကျနော် တို့ နားရောက်တော့လက်မှတ်နဲ့ မှတ်ပုံတင်တောင်းလို့ပြလိုက်ကြတယ်.. ကျနော် တို့ လက်မှတ်တွေ ကို ရထားလက်မှတ်စစ်တွေက စစ်ပြီး ပေမယ့်လဲ မသွားကြသေးပဲ သူတို့အချင်းချင်း တွတ်တွတ် နဲ့စကားတွေပြောပြီးကျနော်နားရောက်လာပြီး " ညီလေး အဲဒီဟာ က တန်ဆာခ ဆောင်ထားလားတဲ့ " ကျနော် က လဲ ရိုးရိုးပဲထင်ပြီး မဆောင်ထားဘူး အကို လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်..အဲဒါဆိုညီလေး မင်းကွန်ပြုတာအတွက် ဒါဏ်ကြေးဆောင်ရမယ်ဆိုပြီး တဖွဲ့လုံးဝိုင်းအုံလာပါရောဗျာ.. ကျနော် တော်တော်အံ့သြ သွားတယ်..။
အခြားနိုင်ငံတွေအားလုံးနီးပါး မှာ ကျနော် သိသလောက်ကတော့ရထားပေါ်မှာ ဖြစ်စေ ကားပေါ်မှာဖြစ်စေ ရထားစီးရင်း ကားစီးရင်း ရုံးလုပ်ငန်းအတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခြားအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် laptop သုံးရင် တန်ဆာခပေးဆောင်ပြီး သုံးရတယ်လို့တခါမှ မကြားခဲ့ဘူးပါ..။
ကျနော် လဲ ဒါဏ်ကြေးဆောင်ရင်လဲ နည်းနည်းပါးပါးလောက်ပဲ ထင်ပြီး ကျနော် ဘယ်လောက်ဆောင်ရမှာလဲ မေးတော့၄၂၀၀ ပါတဲ့..။ ကျနော် စိတ်ထဲတော်တော်ခံပြင်းသွားတယ်ဗျာ..လူတယောက် စီးခ ၂၅၀၀ ပဲကျတာ laptop သေးသေးလေး ကို ၄၂၀၀ ဆိုတော့ကျနော် မှားလားဗျာ.။ ကျနော် ပြန်ပြောလိုက်တယ် ဘယ်လို သတ်မှတ်ချက်နဲ့ကောက်ခံတာလဲ မေးတော့ပလတ်စတစ်လောင်းထားတဲ့ စာရင်းစာရွက် ထုတ်ပြတယ်..။
ညီလေးကို ..ကိုတို့ တောင်းတာ က လက်နှိပ်စက်ဈေးနဲ့ပဲတောင်းတာပါတဲ့…ဒီမှာကြည့်ကွန်ပြူတာဆိုရင် (၁၂၀၀၀ ) ဒါဏ်ဆောင်ရမှာတဲ့ ..။ ကျနော် လျှာရှည် မိကာမှ ပိုဆိုးနေတော့တယ်ဗျာ..။ ကျနော် က ပြောတယ် ဒါက laptop ပဲ အကိုတို့ စာရွက်ထဲမှာ laptop လို့ ရေးထားတာ မပါဘူး..ကျနော် မဆောင်နိုင်ဘူးဗျာလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်..ဒီတော့ကျနော် ကို လက်မှတ်စစ်ကြီး က ပြန်ပြောတယ်ဗျ..ဒါလဲကွန်ပြုတာပါပဲ တဲ့ဗျာ..သကောင့်သားကြီးတွေ က ဒါကြတော့သိသားဗျာ..ညီလေးမဆောင်နိုင်ရင် ကိုတို့ က ပစ္စည်းကို သိမ်းရပါလိမ့် မယ်တဲ့…ခံပေရော့ဗျာ..
လျှာရှည်မိကာမှ ပိုပိုဆိုးလာတယ်..ကျနော်လဲ ပြန်ချော့ရတာပေါ့ဗျာ..အကိုအဲဒါဆိုလဲ နည်းနည်းတော့လျှော့ဗျာ.. ၄၂၀၀ တော့ မလုပ်ပါနဲ့ ဆိုတော့..အဲလိုဆိုရင် တော့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့..တောင်ငူထိဆိုရင် ၂၁၀၀ ပဲ ပေးပါတဲ့.. ကျနော် လဲ လျှာမရှည် ရဲတော့ဘူးဗျို့ ..ပေးလိုက်ရတော့ တာ ပဲ…
laptop ကို လက်နှိပ်စက် ဈေးနဲ့ ဒါဏ်ငွေဆောင်ခဲ့ရတဲ့မြန်မာ့မီးရထားတာ ဖြတ်ပိုင်း
ကျနော် သိထားသလောက်ကတော့ကွန်ပြူတာ ကို တန်ဆာဆောင်ရမယ်ဆိုတာ က Desktop ကွန်ပြူတာကိုဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ဟန်တူပါတယ်..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်အောင် ရေးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ကွန်ပြူတာ ဆိုပြီးရောကြိတ်တာခံလိုက်ရတဲ့ ကျနော် လို့ အဖြစ်မျိုး သူငယ်ချင်းတွေ မကြုံရအောင် ကျနော် ပြောပြချင်တာပါပဲ..။
ကျနော် လဲ နေပူတာတွေ လေပူုတာတွေ ရထားပေါ်ကချဉ်စူးစူး အနံ့တွေ ကိုခံစားနေရတာတွေ ဘယ်ပျောက်ကုန်မှန်း မသိတော့ပဲ ..တယောက်ထဲ တွေးမိတွေးရာတွေးလာလိုက်တာ ရထားရပ်သွားတော့မှ ဘေးဘီဝဲယာ ကြည့်လိုက်တော့လယ်ကွင်းခေါင်ခေါင်ကြီးမှာ ရထားကြီးက တုတ်တုတ် မှ မလှုပ်အောင်ရပ်သွားတာ သိလိုက်ရတယ် ..ကျနော် လဲ ပြတင်းပေါက်က ခေါင်းထုတ်ကြည့်လိုက်တော့ရထားဝန်ထမ်းတွေ အောက်ဆင်းပြီး ရထားအောက်ကို ကြည့်နေတာတွေ တာ နဲ့အောက်ဆင်းပြီး စပ်စုကြည့်လိုက်တော့ရထားတွဲ ဘရိတ်ဖမ်းတဲ့ လေပိုက်ပြုတ် လို့လေပေါင်ကျပြီးထိုးရပ် သွားတာတဲ့ဗျာ.. မိနစ် ၂၀ လောက်ကြာအောင်ပြင်လိုက်တော့ရပြီရထားပြန်ထွက်မယ်ဆိုပြီး ဥသြဆွဲ ပြီး ပြန်ထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်..နောက်တနာရီလောက်ခုတ်မောင်း ပြီး ချိန်မှာပဲ စောစော ကလိုပဲ ရထားက ရပ်သွားပြန်ရော..ကျနော် လဲဒီလောက်တော့နပ်ပါတယ်ဗျာ..ကျနော် သိလိုက်ပြီ တို့စီးလာတဲ့ရထားကြီးလေပေါင်ကျ သွားပြန်ပြီလို့ ..ဒီတခါဖြစ်တာကတော့ကျနော်စီးလာတဲ့တွဲ အောက်ကဖြစ်တာ တဲ့ ကျနော် မနေနိုင်ဘူးဆင်းကြည့် လိုက်တယ် ဘယ်လို ကြောင့်လေပေါင်ကျကျနေလဲဆိုတာ သိချင်လို့ ဆိုပါတော့ ..။ ရထားဝန်ထမ်းတွေလဲ Toolbox ဆွဲပြီးရောက်လာပြန်တယ်..ရထားဘရိတ်တွေ ကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ လေပိုက်က ပြုတ်ထွက်သွားတာဗျ..။ ဒီနေရာမှာကျနော် တို့ မြန်မာတွေက တော်ပြန်ရောဗျို့..ပိုက် ၂ ခုကိုဆက်တဲ့ ၀ါရှာ က ပြုတ်ပြီးလမ်းမှာ ကျကျန်ခဲ့တော့ဝါရှာ အစား ပုဆိုးစုတ်ကိုအစားထိုးပြီးတော့ထည့်လိုက်ပြီး လေဘားပြန်ဖွင့်လိုက်တာ
( ရပြီတဲ့ ) အော်သံတခု ထွက်လာတော့ကျနော် ဟင်း ခနဲ သက်ပြင်းချ မိတယ်..။
ခရီးသည်တွေနဲ့ ရထားကြီး ဟာ ဆက်ရမယ့်ခရီးကို ဆက်ခဲ့ကြပြန်ရောဆိုပါတော့ ဗျာ.. တောင်ငူမြို့ အ၀င် ခပေါင်းတံတားပေါ် ဖြတ်နေချိန် တောင်ငူမြို့ကြီးကို မှောင်မှောင်မဲမဲကြီးမှာ တွေ့နေရချိန်မှာပဲ စီးတော်ယဉ် ရထားကြီး က ရပ်သွားပြန်ပါရောဗျာ…ဒီတခါတော့ကျနော် မဆင်းတော့ဘူး..ရထားလုံးလုံး ဆက်သွားမရတော့ လဲ ကျနော် တို့လာတဲ့ခရီးကရောက်နေပြီဆိုတော့အထုတ်တွေသာပြင်နေ လိုက်တော့တယ်…ကျနော် လဲ မကြည့်ပဲနဲ့သိနေတာကစောစော က ပုဆိုးစုတ် တွေ က ကျန်နေသေးတယ်.. စိတ်ပူစရာမလိုဘူး အချိန်တန်ရင် ပြန်ကောင်းသွားမှာ ပဲဆို ပြီးနေ တာ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ ရထားဘီးလိမ့်သံ ကို ခဏအကြာမှာ ပြန်ကြားလာခဲ့ပြီး မင်းကြီးညိုတို့ စိုးစံရာ ၊ ဘုရင့်နောင်တို့လက်ခမောင်းခတ်ရာ ၊ တပင်ရွှေထီးတို့ထန်းရည်သောက်ရာ ၊ နတ်သျှင်နောင်တို့စာဆိုသီကုံးရာ တောင်ငူမြေ သို့ ရောက်ခဲ့ပါတော့ တယ် ခင်ဗျာ..။
လေပိုက်ပြုတ်ပြီးလေပေါင်ကျရပ် သွားတဲ့ ရထားကို ပုဆိုးစုတ်ဖြင့် ၀ါရှာနေရာမှာ အစားထိုး ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ မြန်မာ့ မီးရထားမှ အင်ဂျင်နီယာများ..
A statement of Canadian Friends of Burma [Ottawa – April 20, 2011 5PM E.T]
On April 19, 2011, Governor General David Johnston accepted the credentials of U Kyaw Tin, Burma’s newly-appointed ambassador to Canada. U Kyaw Tin’s appointment is the first since Burma’s military regime formedanew government based on its revised Constitution of 2008 and subsequent elections in 2010. The immediate question is whether the Burmese Ambassador will have the authority to advocate Canadian viewpoints with regime leaders at home.
“Canada is hopeful that the mutual accreditation of our Ambassadors will provide us with more opportunities to communicate our key interests and concerns,” David Johnston, the Governor General of Canada, said in his speech during the presentation of credentials at Rideau Hall.
“Canada looks forward to engaging with you on important issues of human rights, democratic development, and the rule of law during your tenure as Ambassador. These issues are of fundamental importance to Canada, both at home and abroad,” he added.
For the past six years, Burma has not had an Ambassador in Canada. The last Ambassador, U Tin Win, was recalled to Burma in 2004, following the arrest of the Chief of Intelligence, Gen. Khin Nyunt, and the dismantlement of the intelligence apparatus.
U Kyaw Tin, the new Ambassador, is known asacareer diplomat who has served in the foreign affairs services for approximately 30 years and recently served as the Director General of the political department of Burmese Foreign Affairs Ministry. He was once posted to the Burmese Embassy in Ottawa before.
“We will have to wait and see if he can address the pro-democracy movement’s demands for the release of 2,200 political prisoners in Burma and concerns on gross human rights violations including military offensives against the ethnic minorities in Burma,” said Tin Maung Htoo, Executive Director of Canadian Friends of Burma.
“CFOB believes that the main purpose of the Burma 2010 elections was to entrench military rule in the country and not to bring democracy, security and national reconciliation as proned by the military rulers. Therefore, CFOB is not inaposition to relax its continuous campaigns including the existing Canadian economic sanctions towards the Burmese regime until and unless our demands and concerns are met,” he added.
Canada-Burma relations were established in 1958. With the exception ofafew years during the 1980s, Burma has maintainedapermanent diplomatic mission in Ottawa ever since. Canadian diplomats with responsibility for Burma have operated from the Canadian High Commissions in Malaysia and Bangladesh and more recently from the Canadian Embassy in Thailand.
20 April yeyintnge's Diary.doc
1802K View Download
20 April yeyintnge's Diary.pdf
3337K View Download
20 April Yeyintnge's Diary
အမျိုးသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးလား၊ ခိုင်မာရေးလား
ထွန်းထွန်း | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဧပြီလ ၂၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၃၈ မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရကတော့ တက်လာပြီး ရက်ပိုင်းအကြာ ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့မှာပဲ နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက် ၄ ရပ်ထဲက “အမျိုးသား ပြန်လည် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး” အစား၊ “အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု ခိုင်မာရေး” လို့ ပြောင်းလဲလိုက်ပါပြီ။
ဒီလိုစကားလုံးမျိုး အစားထိုးလိုက်ပုံထောက်ရင် အစိုးရသစ် မတက်ခင်အထိ အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး လိုအပ်ခဲ့တယ်လို့ လက်ခံခဲ့တဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒါပေမဲ့လည်း အစိုးရသစ်တရပ် တက်လာရုံနဲ့ပဲ ရုတ်ချည်းဆိုသလို အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရှိသွားပြီဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုးကိုတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာပင်။
ပြည်တွင်းစစ်မီးနဲ့အတူ နှစ် ၆ဝ ခန့်အကြာ လိုအပ်နေတဲ့ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု တနည်းအားဖြင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်မှု အမှန်တကယ် ဖြစ်ထွန်းသွားပါရဲ့လား။ ဒီအယူအဆကို လက်မခံသူတွေ ရှိနေပါတယ်။
“ဒီစကားကို ကြေညာလိုက်ခြင်းဟာ ကမ္ဘာက တောင်းဆိုနေတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ၊ ဒီမိုကရေစီလို၊ NLD (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်) လို ပြည်တွင်းကနေပြီးတော့ တောင်းဆိုနေတဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဆွေးနွေးပွဲဆိုတဲ့ ဟာမျိုးတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေ တောင်းဆိုနေတဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် တောင်းဆိုမှုအားလုံးကို စစ်အစိုးရက ငြင်းပယ်လိုက်တဲ့သဘော သက်ရောက်တယ်လို့ အဲဒီလိုပဲ ယူဆပါတယ်” လို့ NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ဝင် ဦးဝင်းတင်ကတော့ ရှုမြင်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) WLB ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ မဆူးပွင့်က ဆောင်ပုဒ်ပြောင်းပေမယ့် အနှစ်သာရ မပြောင်းလို့ ဆိုပါတယ်။
“အဖက်ဆယ်လို့ ရလိုရငြား၊ နောက်တခုက ဘာပဲပြောပြောပါ..။ ဒီလို ကြော်ငြာတွေ၊ ဆောင်ပုဒ်တွေကို ကိုင်ခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံရေးအရ တကယ်တမ်း သွားသွား၊ မသွားသွား သွားနေသယောင် ဟန်ပြတဲ့အနေနဲ့ ပြင်လိုက်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အနှစ်သာရကတော့ ဘာမှ ပြောင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အဲဒီလို ပြောင်းလဲရုံနဲ့”
လမ်းပြမြေပုံ ၇ ချက် ပြီးသွားပြီ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ အရေးအရာတွေကို လွှတ်တော်ထဲမှာပဲ ပြောဆိုဖို့ အစိုးရသစ်က လမ်းကြောင်းပေးနေပေမယ့်၊ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေက ၂၁ ရာစု ဒုတိယပင်လုံညီလာခံ ခေါ်ယူရေးကိုဆီ ဦးတည်နေဆဲပါ။
အာဏာရနဲ့ အတိုက်အခံရဲ့ လမ်းကြောင်း ၂ ခု ရပ်တည်ပုံချင်း၊ ရည်ရွယ်ပုံချင်း မတူရင် ဆက်စပ်ပေးမယ့်အရာ မရှိတော့ဘူးလား၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားအရေး လုပ်ကိုင်သူတွေ အစဉ်တစိုက် တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် “တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး” အလားအလာကကော ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
အခြေခံ ပြဿနာ ၄ ရပ်
မြန်မာပြည် နိုင်ငံရေးမှာ အခြေခံကျတဲ့ ပြဿနာ ၄ ရပ် ရှိပါတယ်လို့ ဦးဝင်းတင်က ဆိုပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ တိုင်းရင်းသားအရေးနဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအရေးလို့ သူက ကောက်ချက်ချတာပါ။ ဒီပြဿနာတွေ မဖြေရှင်းသေးရင် အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး မရှိသေးဘူးလို့ အဓိပ္ပာယ်ကောက်ပါတယ်။
ဦးဝင်းတင် တင်ပြချက် ...
ဒီမိုကရေစီ ။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD အပါအဝင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ CRPP ဝင်တွေ၊ တခြား အပစ်ရပ်နဲ့ အပစ်ရပ်မဟုတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ တည်ရှိမှုဟာ မျက်ကွယ်ပြုခံရတုန်းပါ။
ဒီအင်အားစုတွေဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာ လူထုရဲ့ ထောက်ခံမှု အကျယ်အပြန့် ရရှိထားသလို စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ပေါ်ထွန်းရေးကို တောင်းဆိုနေဆဲပါ။ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် တိုက်တွန်းတောင်းဆိုမှု မှန်သမျှကို အစိုးရဘက်က ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားမဝင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မရှိစေဖို့လည်း ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲဝင် ပါတီတွေကို မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းအတွင်း အစိုးရသစ်က တားမြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
အင်တာနက် ပိတ်ပင်မှုအဆိုးဆုံး နိုင်ငံတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒုတိယ အဆိုးဆုံးနေရာမှာ ရပ်တည်နေသလို အသုံးပြုသူတွေကိုလည်း ဖမ်းဆီးထောင်ချမှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ ဝါရှင်တန်အခြေစိုက် Freedom House က မကြာခင်ကပဲ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။
လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်၊ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် အပါအဝင် ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးတွေအပေါ် ထိန်းချုပ်ဆဲပါ။
“အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာမှာ လမ်းလျှောက်ခွင့်တွေ ရတယ်။ ရုပ်သိမ်းတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ပြန်ရုပ်သိမ်းပေးနေကြတယ်။ ဒီလုံခြုံရေးဥပဒေတွေ မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေတယ်။ ဟိုတုန်းကတည်းက ကြေညာထားခဲ့တဲ့၊ ၁၉၈၈ ကတည်းက ကြေညာထားခဲ့တဲ့ ဥပဒေက ဒီကနေ့အထိ ရုပ်သိမ်းရခြင်း မရှိသေးဘူး” လို့ ဦးဝင်းတင်က ဆိုပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး ။ ။ အခုထိ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူ ဦးရေ ၂၂ဝဝ ကျော် ရှိနေပေမယ့် စစ်တပ်နောက်ခံပြု အစိုးရတွေကတော့ မရှိဘူးလို့ပဲ တစိုက်မတ်မတ် ငြင်းခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပြင် တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့တာ၊ လူသတ်တာ၊ ပြောင်းရွှေ့တာ၊ ပေါ်တာဆွဲတာတွေက ရှိတုန်းပါ။ ကလေးစစ်သား၊ အဓမ္မလုပ်အားပေး ကိစ္စတွေကလည်း သတင်းတွေ ထွက်နေတုန်းပါ။
ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ကရက် ZNC ဥက္ကဋ္ဌ ပူးကျင့်ရှင်းထန်ကလည်း “တကယ်လုိ့ ခိုင်မာတဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဘာလို့ မလုပ်တာလဲ။ သူက စပြီးတော့ အခုထက်ထိ သေနတ်သံတွေ မစဲဘူးဗျာ။ အဲဒါတွေက ဘာ့ကြောင့်လဲ။ ဒီဥစ္စာတွေက ဘယ်သူ့တာဝန်လဲ။ အဲဒီ သေနတ်သံတွေ စဲအောင်လုပ်ဖို့ဟာ အစိုးရမှာ တာဝန် မရှိဘူးလား။ ဒါ ဘာလုပ်တာလဲ။ အခု အလုံးအရင်းဗျာ။ ရှမ်းပြည်မှာလည်း တိုက်တယ်၊ ကချင်ပြည်မှာလည်း လုပ်တယ်။ အခု ကယားပြည်နယ်မှာလည်း လုပ်နေတာ အားလုံး မြင်နေတာပဲ၊ တကမ္ဘာလုံး မြင်နေတာပဲဗျ” လို့ မဇ္ဈိမကို ပြောပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား ။ ။ မြန်မာ့အရှေ့ဘက်၊ အနောက်ဘက်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပစ်ခတ်သံတွေ ဝေစီညံနေတုန်းပါ။ တန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြာရှည်ဆုံး ပြည်တွင်းစစ်ပါပဲ။
စစ်အစိုးရအဆက်ဆက် ဖြတ်လေးဖြတ်စစ်ဆင်ရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေက သိန်းနဲ့ချီ ရှိနေတာပါ။
ဦးဝင်းတင်က “တိုင်းရင်းသားတွေ ပြောနေတဲ့အချက်က များများ မဟုတ်ဘူး။ နှစ်ချက်ပဲ ရှိတယ်။ တန်းတူခွင့်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုတဲ့ အချက်နှစ်ချက်ပဲ တောင်းဆိုနေတာ။ အဲဒီတောင်းဆိုချက် နှစ်ခုကို မရဘဲနဲ့ကတော့ ကျန်တဲ့ ပြဿနာတွေ၊ ရွာတွေ ပြန်ဆောက်ပေးရုံနဲ့လည်း ပြဿနာ မပြီးဘူးဗျ။ ရွာတွေ ရွှေ့ပြောင်းတွေ ဘာတွေကို နေရာပြန်ပြီးတော့ ချထားပေးမယ်ဗျာ။ မပြီးဘူးဗျ။ နိုင်ငံရေးပြဿနာဟာ အဲဒီ နှစ်ချက်ပဲ” လို့ ဆိုပါတယ်။
ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ။ ။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ပင်လုံစာချုပ်နောက်ပိုင်း ဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့ ပြဿနာပါ။ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုအတွက် ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေဟာ ကိုယ်စားမပြုနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၆၁ ခုနှစ် တောင်ကြီးညီလာခံမှာ တိုင်းရင်းသားတွေက ဆန္ဒသဘောထားတွေ ထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းအသံလွှင့်ရုံမှာလည်း ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ညီလာခံမပြီးခင် ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း ဦးဆောင်တဲ့ တပ်မတော်က တိုင်းပြည်အာဏာ သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲအောင်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ပါ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာ ဒီနှစ် မတ်လကုန်အထိပါပဲ။ ဒီကနေ့ အစိုးရသစ်ဟာလည်း စစ်တပ်နောက်ခံပြု ကြံ့ဖွံ့အစိုးရအဖြစ်ပဲ အတိုက်အခံတွေနဲ့ လေ့လာသူတွေက သတ်မှတ်ထားတာပါ။
“ပြည်ထောင်စု ဖြစ်လို့ရှိရင် ငါတို့ ဗမာကို သူတို့နဲ့ တန်းတူလို့ မရဘူးဆိုတဲ့ အမြင်မျိုးနဲ့ ဒါကို ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း အာဏာသိမ်းခိုင်းလိုက်တာပဲ။ အဲဒီတော့ ဒီဟာတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အခုအချိန်မှာ နအဖက နေဝင်းထက်အောင် ဆိုးတယ်လို့။ သန်းရွှေဆိုရင် အဆိုးဆုံးပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလိုကို အခုပြောင်းလဲပြီးတော့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒါက ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ သူ့စကားက အမှန်က ချိုတယ်၊ ကောင်းတယ်၊ လိမ္မာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီစကားအတိုင်း ဟုတ်လား မဟုတ်လား၊ တကယ် ဖြစ်လာမလားဆိုတာ လူတွေက စောင့်နေကြတာလေ” လို့ ပူးကျင့်ရှင်းထန်က ပြောပါတယ်။
၂၁ ရာစု ဒုတိယပင်လုံ
ဒီမိုကရေစီလိုလားသူတွေ၊ နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းထဲကနေ ဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့ ပါတီတွေ အပါအဝင် ပြည်တွင်းပြည်ပ တိုင်းရင်းသား အများအပြားက လိုလားနေတဲ့ ဖယ်ဒရစ်စနစ် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တရပ်ပါပဲ။
တပြည်ထောင်စနစ် မဟုတ်ဘဲနဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအားလုံး ပါဝင်တဲ့၊ တန်းတူညီမျှတဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး လမ်းကြောင်းပါပဲ။
“တပြည်ထောင် မဟုတ်သောဆိုတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ တည်ဆောက်မှာ ဆိုတဲ့အခါ ဒီပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးမှာ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတာဟာ ပြည်ထောင်စုကြီးကို၊ စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စုကြီးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စုကြီးကို တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ သံဓိဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်၊ ဒီစစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စုကြီးကို ထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ ဒီပြည်ထောင်စုကို အခြေခံပြီးတော့ ကျနော်တို့က ပြောနေတာ” လို့ ဦးဝင်းတင်က ၂၁ ရာစု ဒုတိယပင်လုံညီလာခံရဲ့ အခြေခံစိတ်ဓာတ်ကို ပြောပြတာပါ။
ဒီကလေးမြို့ကြေညာစာတမ်းကို ပြည်တွင်းပြည်ပရောက် တိုင်းရင်းသားတွေက လက်ခံထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ပါ သူက ဆိုပါတယ်။
၂၁ ရာစု ဒုတိယပင်လုံဟာ ပြည်ထောင်စုကနေ ခွဲမထွက်ဘဲ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်မယ်လို့ ကလေးမြို့ ကြေညာစာတမ်းမှာ ဖော်ပြထားတာပါ။
“ကလေးမြို့ ကြေညာစာတမ်းဆိုပြီးတော့ ပေါ်ထွက်လာတယ်။ အဲဒီမှာလည်း ဒီဖက်ဒရယ်ပုံစံနဲ့ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ဖို့ ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဗျာ။ ခွဲမထွက်သောတို့၊ တပြည်ထောင်စနစ်မဟုတ်သော ဖက်ဒရယ်စနစ် တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ကြေညာချက်တွေ ထုတ်လာတယ်။ နောက်တခါ အခု ပြည်ပမှာ၊ နယ်စပ်ဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင် ဖက်ဒရယ်ကောင်စီဆိုတဲ့ ကောင်စီလို တခုပေါ်လာပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးကလည်း ပြည်ထောင်စုကို ဖက်ဒရယ်ပုံစံနဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရေးဆိုတဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေ ရှိတယ်” လို့ ဦးဝင်းတင်က ပြောပါတယ်။
“အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု ခိုင်မာရေး ဆိုတာဟာ မှားယွင်းနေတယ်။ တကယ်တော့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုဆိုတာက မရှိသေးဘူး။ ဒါကို လုပ်ဖို့အတွက် ဒုတိယပင်လုံညီလာခံက အရေးကြီးတယ်’’ လို့ ပူးကျင့်ရှင်းထန်က သုံးသပ်ပါတယ်။
“ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ဆိုတာမျိုး တကယ်မရှိခဲ့လို့၊ တကယ် မတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့လို့ တိုင်းပြည်ထဲမှာ ဒီလို ပြဿနာတွေ ဖြစ်နေတာကိုး။ အခုမှ ပြည်တွင်းက တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူ ဒေါ်စုက ကြံ့ကြံ့ခိုင် ရပ်တည်ပြီးတော့ ၂၁ ရာစု ဒုတိယပင်လုံ၊ ၂၁ ပင်လုံဆိုတာမျိုး ပြောလာတဲ့အခါကျမှ အစိုးရကနေ နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ ဖာရ၊ ထေးရတဲ့ ကိစ္စပေါ့နော်။ သူတို့မှာလည်း ဒီအမြင်တွေ ရှိတယ်၊ ဒီအယူအဆတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို ပြောချင်လို့ …ဟို လိုက်ပြီးတော့ ဖာထေးရတဲ့ အနေအထားလောက်ပဲ ရှိတယ်” လို့ WLB မဆူးပွင့်ကလည်း ပြောပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု တိုက်ဖျက်မယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး တံခါးကြီး ဖွင့်ထားပြီ စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
“ခင်ဗျားတို့တွေ အကုန်လုံး ကျန်တဲ့ ပြင်ပမှာ ရှိနေတဲ့ စိတ်ရင်း စေတနာကောင်းရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကော၊ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေကော ကျနော်တို့ ပေါင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ပေါင်းလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့က အခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ လုပ်ကြရလိမ့်မယ်” ၊ “ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပါ” ဆိုတဲ့ စကားတွေလည်း ပါပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လွှတ်တော်ထဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးပါဝင်နေပြီ၊ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို လွှတ်တော်ကတဆင့် ဆက်ရှင်းပါတဲ့ လေသံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
၂ဝ၁၁ လွှတ်တော်တွေကို ကြည့်ရင် တိုင်းရင်းသားတွေ ပါဝင်လာနေတာတော့ ငြင်းမရပါဘူး။ ရှမ်း၊ ရခိုင်၊ ကချင်၊ ချင်း၊ ကရင်၊ မွန်၊ ပအိုဝ်း စတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ရှမ်းအမျိုးသား ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းဆို ဒုသမ္မတ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို စစ်တပ်က ရယူထားပြီး ကျန်တဲ့ နေရာအများစုကို စစ်ဝတ်လဲ ကြံ့ဖွံ့အမတ်တွေချည်း ယူထားတာပါ။
အစိုးရသစ်က လွှတ်တော်တွင်းမှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြဿနာအရပ်ရပ်ကို ဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့ ကမ်းလင့်နေပေမယ့်လည်း ပကတိအနေအထားမှာ ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ ကန့်သတ်ခံရမှုတွေ၊ အဆိုပယ်ချခံရမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရာမှာ ၂ဝဝ၈ အခြေခံဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာပြီး ဒီထဲက စည်းဘောင်အရ လျှောက်လမ်းစေလိုတဲ့ လမ်းကြောင်းကို အစိုးရသစ်က ဦးတည်နေသလို အားလုံး ပါဝင်ဖို့ တိုက်တွန်းနေတာပါ။ ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူတွေ အခြေခံဥပဒေကို သစ္စာတည်ပြီး၊ လွှတ်တော်ထဲကနေပဲ ဖြစ်လိုသမျှ တောင်းဆိုစေလိုတဲ့ လမ်းကြောင်းနဲ့ပဲ သွားလိုတာပါ။
လွှတ်တော်ပြင်ပ အတိုက်အခံတွေကတော့ တည်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို အသိအမှတ်ပြုပြီး၊ နိုင်ငံရေး အရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုတာပါ။
လမ်းကြောင်းနှစ်ခု တထပ်ထဲကျဖို့က မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးတဲ့၊ အတိမ်းအစောင်းမခံတဲ့ အနေအထားပါ။ ဖြစ်မြောက်အောင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိပါရဲ့လား ?
“ဒီပြဿနာကြီးတွေ ရှိတာဟာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ လုပ်တာ၊ ဖြေရှင်းတာမဟုတ်ရင် ဖြေရှင်းလို့ မရနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီပြဿနာကြီးတွေကို ကိုင်တွယ်ပြီးတော့ ဖြေရှင်းရင် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို တည်ဆောက်ကြမယ်လို့ ကျနော်တုိ့က ကမ်းလှမ်းတာကိုး။ ကမ္ဘာက ပြောတာလည်း ဒါပဲ။ ဒီပြဿနာကြီးတွေ ရှိတဲ့အတွက် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို စားပွဲဝိုင်းမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပါလို့ ကမ္ဘာက တိုက်တွန်းနေတာ” လို့ ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး ဦးဝင်းတင်က ဆိုပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ တိုင်းရင်းသားနဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု စတဲ့ ပြဿနာ ၄ ရပ်ကို ဖြေရှင်းရာမှာ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးပဲ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အစိုးရသစ်အနေနဲ့ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု ခိုင်မာရေးကို ပြောနေပေမယ့်လည်း တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ မပြေလည်သေးကြောင်း သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
ZNC ဥက္ကဋ္ဌ ပူးကျင့်ရှင်းထန်က “ဒါတွေကို တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင် လုပ်ဖို့ဆိုတာမှာ ပထမ ဦးဆုံးလုပ်မယ့် သူတွေက အစိုးရ၊ အာဏာကိုင်ထားတဲ့သူက စရမှာ။ ဒီဥစ္စာကို အခု အပြင်က လူတွေ၊ အာဏာပိုင် မဟုတ်တဲ့ သူတွေက ဦးဆောင်ပြီးတော့၊ အစပျိုးပြီးတော့ လုပ်တဲ့ ဥစ္စာတောင်မှ သူတို့က အားမပေးချင်ဘူးဆိုတော့ ဒီဥစ္စာ ပြောတာတမျိုး၊ လုပ်တာတခြား ဖြစ်နေတယ်။ တကယ့်တကယ် ဒီဥစ္စာကို ခိုင်မာဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး အခုလုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်ပါစေ၊ ဒါကို တကယ်တမ်း လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဓိက အာဏာပိုင်တွေက အားပေးရမယ်၊ လုပ်ရမယ်” လို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
အာရှ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်၏ မြန်မာ့ စီးပွားရေး သုံးသပ်ချက်
ဇွန်ခေါင် | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဧပြီလ ၂၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၅၁ မိနစ်
အတန်အသင့် ငွေဖောင်းပွမှုနှင့်အတူ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုကို လွန်ခဲ့သည့် ၂ နှစ်အတွင်း ရရှိခဲ့သည်။ လေ့လာသုံးသပ်နေသည့် ကာလအတွင်း စီးပွားရေး အဆောက်အဦတွင် အတန်အသင့် တိုးတက်မှုကို ရရှိခဲ့သည်။ ဆောက်လုပ်ရေး ကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အထောက်အကူများ ရရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ချေးငွေများ မြင့်မားခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်မည်။ ၂ဝ၁၁ မတ်လတွင် တက်လာသော အစိုးရသစ်သည် ထိုအလားအလာများ အပြည့်အဝ ရရှိနိုင်ရန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ကျယ်ပြန့်စွာ ပြုလုပ်ရမည်။
အစိုးရ၏ တိုးတက်မှု ကိန်းဂဏန်းများသည် လောင်စာသုံးစွဲမှု ကဲ့သို့သော စီးပွားရေး တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် ကိန်းရှင်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေ မရှိပေ။
၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးခဲ့သော ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း စီးပွားရေး တိုးတက်မှု ၅.၁ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိခဲ့သည်။ ယခင်နှစ် နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း ရိုက်ခတ်မှုနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ ဝယ်လိုအား နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် စီးပွားရေး တိုးတက်မှု နှေးကွေးပြီးနောက် အတန်ငယ် တက်လာခဲ့သည်။ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း စီးပွားရေး ဦးမော့လာခြင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ သတ္တုကဏ္ဍ၊ ကုန်ချောထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍများတွင် အခြေအနေ ကောင်းခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း လူနေမှုအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျနေဆဲဖြစ်သည်။ ငါးလုပ်ငန်း၊ သစ်တောကဏ္ဍ၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ အပါအဝင် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍက အလုပ်အကိုင် တဝက်နှင့် တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ဖြည့်ဆည်းထားသည်။
၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဤကဏ္ဍမှ ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်လာခဲ့ခြင်းမှာ ဆိုင်ကလုံးဒဏ်ခံ ဧရာဝတီနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း၌ ပြန်လည် တည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းများ လုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၌ ၅.၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့ပြီး၊ မြို့တော်သစ် နေပြည်တော်နှင့် မန္တလေးရှိ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများကြောင့် ဖြစ်သည်။ နေပြည်တော်နှင့် မန္တလေးကို ဆက်သွယ်ပေးသည့် လမ်းမကြီးကိုလည်း တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ အစားအစာနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဲ့သို့ ကုန်ပစ္စည်းများ ဈေးနှုန်းမြင့်မားလာခြင်း အပါအဝင် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများတွင် စီးပွားရေးဦးမော့လာခြင်းကြောင့် ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု မြင့်မားလာစေခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အလယ်ပိုင်းဒေသ၌ ဆက်လက်မိုးခေါင်ရေရှားခြင်း၊ ဆိုင်ကလုံး နာဂစ်ဒဏ်ခံ ဒေသများ၌ မြေများ ဆားပေါက်ခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် တိုးတက်မှုအချို့ နှေးကွေးဆဲ ဖြစ်သည်။ အခြားခန့်မှန်းချက်များနှင့်စာလျှင် သိသာစွာ မြင့်မားတတ်သော အစိုးရ၏ တိုးတက်မှု ကိန်းဂဏန်းများသည် လောင်စာသုံးစွဲမှု ကဲ့သို့သော စီးပွားရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် ကိန်းရှင်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေ မရှိပေ။ စီးပွားရေး စာရင်းအင်းများက အချိန်နှင့် တပြေးညီလည်း မဟုတ်သဖြင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို ခန့်မှန်းရန် ခက်သည်။ အစိုးရက ၎င်း၏ ဘတ်ဂျက် ဘဏ္ဍာရေးလိုငွေကို လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ကကဲ့သို့ ငွေစက္ကူရိုက်နှိပ်သည့်နည်းကို ကျင့်သုံးမည့်အစား ငွေတိုက် စာချုပ်များ ထုတ်ရောင်းသည့် နည်းကို ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ဤနည်းကြောင့် ယခင်က ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိနေသော ငွေဖောင်းပွမှုနှုန်းကို ခုဂဏန်းရောက်အောင် နှိမ့်ချနိုင်ခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှငွေဖောင်းပွမှု နှုန်းသည် ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ၈.၂ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ တွင် ၇.၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။
နိုင်ငံခြားမှ ရငွေများ၌ အဓိကဝင်ပေါက်မှာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပို့ကုန်မှ ဖြစ်သည်။ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဓာတ်ငွေ့ဈေး ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကျဆင်းခဲ့သဖြင့် ဤအရင်းအမြစ်မှ ရရှိသည့် ဝင်ငွေများ လျော့ပါးခဲ့သည်။ သို့သော် ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရငွေပြန်ဦးမော့လာပြီး ဒေါ်လာ ၂.၇ ဘီလျံ ရရှိခဲ့ခြင်းမှာ ထိုင်းမှ ဝယ်လိုအား ပြန်တက်လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ဆောက်လုပ်ရေးသုံး ကုန်ကြမ်းများနှင့် အသုံးအဆောင်များ ပြည်ပမှ ဝယ်ယူတင်သွင်းမှု မြင့်မားလာခြင်းကြောင့် သာမန်စာရင်းလိုငွေသည် ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ တွင် တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ၏ ၂.၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ၌ ၁.၃ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိသည်။ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းများ၌ နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ စီးဆင်း လာခြင်းကြောင့် နိုင်ငံခြား သီးသန့် ရန်ပုံငွေသည် ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်၌ ဒေါ်လာ ၅.၃ဘီလျံခန့် ရှိခဲ့သည်။ ၄င်းပမာဏသည် ၇ လစာ သွင်းကုန်တန်ဖိုးနှင့် ညီမျှသည့် အရန်ငွေများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
ဈေးကွက် ငွေဖလှယ်နှုန်း ၁ ဒေါ်လာလျှင် မြန်မာကျပ် ၁ဝဝဝ နှုန်းမှ ၂ဝ၁၁ ဇန်နဝါရီတွင် ကျပ် ၈၃ဝ နှုန်းအထိ မြင့်မားခဲ့သည်။ ဗဟိုအစိုးရနှင့် နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဘတ်ဂျက်လိုငွေသည် ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ၅.၄ ရာခိုင်နှုန်း ရှိရာမှ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ ၅.၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျယ်ပြန့်သွားမည်ဟု ခန့်မှန်းသည်။
နေပြည်တော် တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အသုံးစရိတ်များ ဘတ်ဂျက်လိုငွေ ဆက်ပြနေဆဲဖြစ်ပြီး ဘဏ္ဍာရေးရငွေ တိုးတက်မှု နှေးကွေးလျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ပို့ကုန်တန်ဖိုးများကို အစိုးရ တရားဝင် ဖလှယ်နှုန်းဖြစ်သော တဒေါ်လာလျှင် ၅ ကျပ်ခွဲနှုန်းဖြင့် ဆက်လက်ပြနေခြင်းကြောင့် သုံးစွဲရန်ရရှိသည့် ဘဏ္ဍာတော်ငွေများ၏ တန်ဖိုးကို လျော့ပါးစေသည်။ အုပ်ချုပ်ကွပ်ကဲမှု မြင့်မားသည့် ဘဏ်များ၏ အတိုးနှုန်းသည် ချေးငွေအတွက် ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အပ်ငွေအတွက် ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သဖြင့် ဘဏ်များသည် အတိုးနှုန်းနိမ့်သော ငွေတိုက်စာချုပ်များကို ဝယ်ယူလိုခြင်းမရှိကြပေ။
ထို့ကြောင့် ငွေတိုက်စာချုပ် ရောင်းချမှုမှရသောငွေသည် ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ဘဏ္ဍာရေး ဘတ်ဂျက်လိုငွေ၏ သုံးပုံ တပုံမျှသာ ဖြည့်စွမ်းနိုင်သည်။ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ တွင် အစိုးရက နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း အများအပြားကို ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်းခဲ့ရာ လေကြောင်းလိုင်း ၁ ခု၊ ဓာတ်ဆီဆိုင် ၂၃၄ ဆိုင်၊ ပြည်သူပိုင် အဆောက်အအုံများ၊ ဆန်ဖြန့်ဖြူးရေး လုပ်ငန်းများပါ ပါဝင်သည်။ ထပ်၍လည်း ရောင်းချဦးမည် မျှော်လင့်ရသည်။
သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ ရောင်းချမှုမှ ရသည့်ငွေကြောင့် နိုင်ငံခြားသီးသန့် ဝင်ငွေ တိုးပွားစေခဲ့သော်လည်း တရားဝင် ဖလှယ်နှုန်းကို သုံးခြင်းကြောင့် ဘတ်ဂျက် သို့မဟုတ် တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ အပေါ်၌ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှု အနည်းငယ်သာ ရှိသည်။
အနာဂတ်ကာလတွင် ရာသီဥတုအခြေအနေ ပုံမှန်ရှိပြီး ၂ဝ၁၁ မတ်လတွင် တက်လာသော အစိုးရသစ်က ဖြည်းဖြည်းချင်း စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ ပို့ကုန်များ တိုးပွား လာခြင်းနှင့် ဈေးကွက်တွင် ရောင်းချသော ဈေးနှုန်း ပိုမိုမြင့်မား လာခြင်းတို့ကြောင့် ကျေးလက်ဝင်ငွေ မြင့်မားကာ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပုဂ္ဂလိက စားသုံးမှု မြင့်မားလာမည် ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ မြန်မာ့ စိုက်ပျိုးရေး ဘဏ်က ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ တွင်လည်း လယ်သမားများကို ချေးငွေနှစ်ဆ တိုးချေးခဲ့ပြီး လာမည့် ၂ နှစ်အတွင်း ထပ်၍ တိုးပေးရန် စီစဉ်ခဲ့သည်။ စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍသည် ချေးငွေရှားပါးမှု ပြဿနာကို ဆိုးဝါးစွာ ခံစားနေရသည်။ ချေးငွေ တိုးပေးခြင်း၊ မကြာသေးမီ နှစ်များတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ထိန်းချုပ်မှု ဖြည်းဖြည်းချင်း လျှော့ပေးခြင်းတို့ကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုများ တိုးပွားစေရန် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ လေ့လာနေသော ကာလအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆက်လက် တိုးနိုင်မည်။ အထူးသဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေး ကဏ္ဍတွင် ဖြစ်သည်။ တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်ထားသည့် စီမံကိန်းများတွင် ရေအားလျှပ်စစ်၊ တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့သည့် ရေနံနှင့် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများသည် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့် ကျခံတည်ဆောက်ထားသည်။
ထိုင်းကုမ္ပဏီတခုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောင်ဘက်ပိုင်းဖြစ်သော ထားဝယ်၌ ယခုနှစ်မှစ၍ ဆိပ်ကမ်းတခု၊ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေး စက်ရုံနှင့် စက်မှုဇုန် တည်ဆောက်ရန် သဘောတူခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီတခုက နေပြည်တော်တွင် လေဆိပ် တခု တည်ဆောက်ရန် သဘောတူ လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။ လေ့လာနေသော ကာလတွင် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်မှု မရှိတော့ပေ။ ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း စီမံကိန်းများမှ ရလဒ်များ ထွက်ပေါ်ရန် ၃ နှစ်ခန့် စောင့်ရဦးမည်။ ဓာတ်ငွေ့တင်ပို့မှုမှ ရရှိသော ဈေးနှုန်းသည် တက်ရန် အလားအလာ ရှိသည်။
မြင့်မားလာခြင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဝယ်လိုအား မြင့်မားလာခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် တိုင်းပြည်ဝင်ငွေအပေါ်၌ သိသာစွာ အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိနိုင်ပေ။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့မှရသည့် ဝင်ငွေကို ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးဖြင့် မပြောင်းလဲဘဲ အစိုးရ ဖလှယ်နှုန်းဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
ထိုအကြောင်းတရားများကို စုပေါင်း လိုက်သည့်အခါ တိုင်းပြည်ဝင်ငွေသည် လာမည့် ၂ နှစ်အတွင်း ၅.၅ ရာခိုင်နှုန်းစီ တိုးတက်မည် ခန့်မှန်းရသည်။
လေ့လာနေသော ကာလအတွင်း ငွေဖောင်းပွနှုန်း ၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိမည်။ ပြည်တွင်းဝယ်လိုအား ကောင်းလာခြင်းနှင့် အစားအသောက်နှင့် လောင်စာ ကမ္ဘာ့ဈေးနှုန်းများ မြင့်မားခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်း၌ ဆန်ဈေးနှုန်းသည် ၂ဝ၁၁ အစောပိုင်း ကတည်းကပင် တက်နေသည်။ အစိုးရက ၂ဝ၁၁ မတ်လတွင် ဆန်တင်ပို့မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဆန်ဈေးထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဟု ယူဆရသော်လည်း ဆန်အတော်များများ တရားမဝင် တင်ပို့ရောင်းချဆဲ ဖြစ်သည်။ သာမန်စာရင်း လိုငွေသည် တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ၏ ၄.၁ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၄.၇ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျယ်ပြန့်မည်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် စားနပ်ရိက္ခာများ တင်ပို့မှုမှရသည့် ဝင်ငွေကို ဆောက်လုပ်ရေး အသုံးအဆောင်များ တင်သွင်းမှု မြင့်မားခြင်းက ခြေဖျက်သွားနိုင်သည်။
လူမှုရေး ကဏ္ဍများတွင် အသုံးပြုမှုသည် တိုင်းပြည် ဝင်ငွေ၏ ၁ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိသဖြင့် အခြား ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများ၏
၎င်းအလားအလာများကို အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ကျယ်ပြန့်စွာ ပြုလုပ်ရန် လိုသည်။ လူနေမှု အဆင့်အတန်းတွင်ရော၊ ဆင်းရဲမှု လျော့ပါးရေး၌ပါ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနောက် ရောက်နေပြီး စီးပွားရေး အလျင်အမြန် တိုးတက်ရန် လိုသကဲ့သို့ ဆူကြုံနိမ့်မြင့် ကွာဟမှုများ လျှော့ချရန် ပျမ်းမျှဝင်ငွေနှင့် ဥစ္စာဓန မျှတစွာ ခွဲဝေဖြန့်ဖြူးရန်လည်း လိုအပ်နေသည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းမွန်ရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အခြေခံ အဆောက်အဦများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ဘဏ္ဍာရေး အရင်းအမြစ်များ ပေါ်ထွက်ရေး၊ ငွေဖလှယ်နှုန်း တခုတည်း သတ်မှတ်ရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ မိုက်ခရိုအဆင့် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု တောင့်တင်းခိုင်မာရေးနှင့် စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု လွတ်လပ်ခွင့် ပေးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိသော်လည်း စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို အတိုင်းအတာတခုအထိ အထောက်အကူ ဖြစ်နိုင်မည့် အလားအလာ ရှိသည်။ ဘဏ်အသစ် ၄ ခုနှင့် ဘဏ်ခွဲအသစ် ၄၉ ခုကို ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ တွင် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုခဲ့ရာ ပုဂ္ဂလိကချေးငွေ သိသာစွာ တိုးလာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဘဏ်များ ပိုင်ဆိုင်သည့် အက်ဆက်ပမာဏ နိမ့်နေသည်။ ပုဂ္ဂလိက အရင်းအနှီး၏ သုံးပုံတပုံခန့်သာ တရားဝင်ကဏ္ဍမှ ရရှိသည်။ တရားဝင် ဘဏ္ဍာရေး အရင်းအမြစ်များကို လက်လှမ်းမီမှု ကျယ်ပြန့်လာစေရန် အလို့ငှာ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များကို အပြည့်အဝ စီးပွားရေးဆန်ဆန် လည်ပတ်ရန်၊ အတိုးနှုန်းများကို လွှတ်ပေးရန်၊ အပေါင်ပစ္စည်း သတ်မှတ်ချက်များ လျှော့ချပေးရန်နှင့် ဘဏ်များအတွက် အပ်ငွေနှင့် အရင်းအနှီး အချိုးတို့ကို လျှော့ပေးရန် လိုအပ်သည်။
နိုင်ငံပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပုဂ္ဂလိကလက်သို့ လွှဲပြောင်းခြင်းကြောင့် ပြိုင်ဆိုင်မှု တိုးပွားလာကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြားလာပါက ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အားပေးမည့် အလားအလာ ရှိသည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကို မြင်သာထင်သာ ပိုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ယုံကြည်မှုတိုးပွားလာစေကာ အက်ဆက်များကို တန်ဖိုးဖြတ်မှုလည်း မြင့်မားလာစေနိုင်သည်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် ယေဘုယျအားဖြင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းပိုင်း၊ တရားဥပဒေပိုင်းနှင့် မူဝါဒပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်၌ မူတည်သကဲ့သို့ အုပ်ချုပ်မှုအဆင့် မြင့်မားရေးအပေါ်၌လည်း တည်နေသည်။
စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ချေးငွေသည် ယခင်နှစ်က တိုးတက်မှု အတန်အသင့် ရှိသော်လည်း နည်းပါးဆဲဖြစ်သည်။ လယ်သမားများအနေဖြင့် လယ်ယာသုံး သွင်းအားစုများကို အပြည့်အဝ မသုံးနိုင်သဖြင့် မြေယာအသုံးချမှုတွင် ထိရောက်မှု နည်းနေသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ ထိရောက်စွာ မဆောင်ရွက်နိုင်ပေ။ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ ကျေးလက်ဒေသများသို့ ချဲ့ထွင်ရန် အဟန့်အတားများကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ သီးနှံအာမခံလုပ်ငန်းများ မိတ်ဆက်ကျင့်သုံးခြင်း၊ လယ်သမားများကို လယ်ယာအသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခြင်းတို့က ချေးငွေဖန်တီးရာ၌ အသုံးဝင်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။
ထိုနည်းလမ်းများကို ကျေးလက်အခြေခံ အဆောက်အဦကဏ္ဍများ၌ အစိုးရ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရောင်းချမှုမှ ရသည့် ငွေကြောင့် နိုင်ငံခြား သီးသန့်ဝင်ငွေ တိုးပွားစေခဲ့သော်လည်း တရားဝင် ဖလှယ်နှုန်းကို သုံးခြင်းကြောင့် ဘတ်ဂျက် သို့မဟုတ် တိုင်းပြည်ဝင်ငွေအပေါ်၌ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှု အနည်းငယ်သာ ရှိသည်။
အကယ်၍ ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးကို ဖလှယ်မည်ဆိုပါက အစိုးရဘဏ္ဍာငွေကို သိသာစွာ မြင့်မားစေပြီး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် အသုံးစရိတ်များ သိသာစွာ တိုးစေနိုင်သည်။ ယခုအခါ၌ လူမှုရေးကဏ္ဍများတွင် အသုံးပြုမှုသည် တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ၏ ၁ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိသဖြင့် အခြားဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ အောက်တွင် ရောက်ရှိနေသည်။
နှုန်းအမျိုးမျိုး ဖြစ်နေသော ဖလှယ်နှုန်းများကို တမျိုးတည်းဖြစ်ရန် ပေါင်းစည်းသည့်နည်းကို ကျင့်သုံးခြင်း၊ ခြွင်းချက် အနည်းငယ်သာ ထားရှိကာ အခွန်ကောက်ခံသည့် အခြေခံကို ကျယ်ပြန့်စေခြင်း၊ ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော အခွန်စနစ် ချမှတ်ကျင့်သုံးခြင်း၊ သွယ်ဝိုက်ခွန်များထက် ဆင်းရဲသားများအတွက် ပို၍ တရားမျှတသော တိုက်ရိုက် အခွန်ကို ပိုကျင့်သုံးခြင်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ ငွေဖလှယ်နှုန်း တခုထဲဖြစ်အောင် လုပ်ခြင်းဖြင့် ဘဏ္ဍာရေး အရင်းအမြစ်များ ပေါ်ပေါက်လာစေနိုင်သည်။
မြန်မာကို အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌရာထူးအတွက် လက်မခံလိုဟု အမေရိကန် ပြော
ဧရာဝတီ Wednesday, 20 April 2011 17:54
လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေးတို့တွင် နာမည်ဆိုးရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသည် လာမည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက အတူတကွ အလုပ်မလုပ်လိုကြောင်း အမေရိကန်အစိုးရက ပြောဆိုလိုက်သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်က စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသော အာဆီယံ-အမေရိကန် ခေါင်းဆောင်များ စည်းဝေးပွဲတွင် အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား၊ ထိုစဉ်က စစ်အစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်နှင့် တခြားနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - AP)
မြန်မာနိုင်ငံက အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရန် အထူးကြိုးပမ်းနေစဉ်တွင်ပင် အမေရိကန်အစိုးရသည် တခြား အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့ မြန်မာအစိုးရသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏ သဘောထားကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မစ္စတာ မာ့ခ် တိုနာ က အရပ်သားအစိုးရအနေဖြင့် ထွက်ပေါ်လာသည့် မြန်မာ့အစိုးရသစ်က အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီဟု အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးထံသို့ အကြောင်းကြားပြီးနောက် အမေရိကန်နိုင်ငံက တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပုံမှန် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။
မစ္စတာ မာ့ခ် တိုနာက “မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုအစိုးရပဲ တက်လာ တက်လာ ကျနော်တို့အနေနဲ့ စိုးရိမ်နေဦးမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဆိုးရွားလှတဲ့ မြန်မာပြည်တွင်းက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်ပါပဲ။ အဲဒီနောက်ကွယ်က အကြောင်းတွေကိုတော့ ဘာမှ မှတ်ချက် မပေးလိုပါဘူး” ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများ မတိုးတက်သေးသရွေ့၊ စစ်မှန်သည့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို မဖော်ဆောင်နိုင်သေးသရွေ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံက ဦးဆောင်မည့် အာဆီယံအဖွဲ့နှင့် ဆက်ဆံရန် ခက်ခဲလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးနှင့်ပတ်သက်၍ လာမည့် မေလ ၇ ရက်နှင့် ၈ ရက်နေ့တို့တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာကာတာမြို့၌ ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ရာ အာဆီယံခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် စဉ်းစားရန် လုံလောက်သည့် အချိန်ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် အစိုးရအရာရှိများက ပြောသည်။
တချိန်တည်းတွင်ပင် အမေရိကန်သမ္မတ မစ္စတာ ဘားရက် အိုဘားမား အဆိုပြုထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ်က မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ထားရှိသည့် မူဝါဒအပေါ် သက်ရောက်နိုင်မည့် ကြိုးပမ်းမှုတခုခု စတင်လုပ်ဆောင်ရန် အမေရိကန် အစိုးရအဖွဲ့က မျှော်လင့်နေကြောင်းလည်း သိရသည်။
မစ္စတာ အိုဘားမားသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ အာရှ ပစိဖိတ် ဒေသဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးဌာနမှ မစ္စတာ ဒဲရက် မစ်ချယ်ကို အဆိုပြုထားသည်။
မစ္စတာ မာ့ခ် တိုနာက “မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ မူဝါဒအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မယ့် ကိစ္စတွေကို အထူးကိုယ်စားလှယ်က ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ မြန်မာ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အပေါ် ကျနော်တို့ရဲ့ လေးနက်တဲ့ စိုးရိမ်မှုကိုလည်း သူကပဲ မီးမောင်း ထိုးပြပါလိမ့်မယ်” ဟု ပြောသည်။
အာဆီယံ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မစ္စတာ ဆူရင် ပစ်ဆူဝမ် ကမူ မြန်မာနိုင်ငံကို အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် ဆုံးဖြတ်မှုတွင် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အရှေ့အာရှထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများ၏ သဘောထားအမြင်ကိုလည်း လေးစားပါကြောင်း ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့က အဆာဟိရှင်ဘွန်း သတင်းဌာနသို့ ပြောဆိုခဲ့သည်။
အရှေ့အာရှ ထပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများတွင် အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ဂျပန်၊ တရုတ်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်နှင့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံတို့ပါဝင်ပြီး ယခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့ကလည်း ပူပေါင်းမည် ဖြစ်သည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ ဖိအားပေးမှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံက အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌရာထူး မယူဘဲ အလှည့်ကျော်ပေးခဲ့သည်။ http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/6210-2011-04-20-10-58-29
သမ္မတသစ်ရဲ့ ချွင်းချက်မရှိ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကိ...
New Burmese Ambassador to Canada:amessenger for ...
မြန်မာကို အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌရာထူးအတွက် လက်မခံလိုဟု အမေရိက...